रमेश र नन्दाकी छोरीले आँखा देख्लिन् कि दृष्टि बिहिन होलीन् ? (हेर्नुस् यो भिडियो) – Nep Stok
पुष ४, २०७८ आइतबार 169
आज भन्दा एक वर्ष अगाडि बिहे बन्धनमा बाँधिएका रमेश प्रसाईं र नन्दा सिंह को पहिलो सन्तान को रुप छोरिको जन्म भएको छ। डाक्टर गहाना गुरुङ के शीले नन्दाको सफल अप्रेसन गरेर छोरीलाई जन्म दिएकी हुन । नन्दा को स्वास्थ्य अवस्था एकदमै ठिक रहेकोले तीन दिन पछि अस्पतालले डिस्चार्ज दिएको थियो । आफू काठमाडौ मै भएकोले खासै डर नलागेको नन्दा बताउँछिन । गाउँ कति आमाहरूले अकालमा नै ज्यान गुमाएका हुन्छन । त्यसैले पनि केहि डर भने रहने उनको भनाई छ ।
हिन्दु संस्कार अनुसार सातौ दिनमा नन्दाको छोरिको न्वारन गरिएको थियो । न्वारनमा नाम ‘न’ बाट जुरेको भएता पनि हजुरआमाले आफुहरु दुबै जनाको नाम मिलाएर छोरिको नाम रचना राखिदिएको नन्दाले बताईन । सासुको रुपमा मैले मेरो जन्म दिने आमा पाएको जस्तो लाग्ने गरेको नन्दाको भनाई छ । सासुले आफ्नो एकदमै राम्रो सँग हेरविचार गरेको उनले बताईन । म अहिले यति को छिटै निको हुनुमा सासुको सहयोगले नै गर्दा भएको उनी बताउँछिन ।हुन त नन्दा गर्भवती हुँदै नै सामाजिक संजालमा रमेश प्रसाईको छोरा या छोरी भयो भनी विभिन्न चर्चा हुने गरेको थियो ।
के रमेश र नन्दाकी छोरीले आँखा देख्छिन त ? रमेश र नन्दा दुवै द्रिस्टिबिहिन भएतापनि के उनकी छोरीले आँखा देख्छिन त ? धेरैले जिज्ञासा् राखेको प्रश्न यहि हो । कति ब्यक्तिहरुले छोरी रचनाले आँखा देख्छिन भनेका थिए त धेरैले देख्दिनन भनेका थिए । तर के वास्तवमा छोरीले आंखा देख्छिन त ?
बाबुआमाले नै आँखा नदेख्ने भएतापनि छोरीले भने देख्न सक्ने भनेर डा. गहना गुरुङ केसीले बताएकि छिन । डा. गहना भन्छिन, ” छोरी निकै नै स्वस्थ छिन । अबको १ महिनापछि छोरीको मानसिक अवस्थाको पनि टेस्ट पनि हुन्छ ।
Prevपाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन, पुस ४ गते आइतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextउत्कृष्ठ राष्ट्रसेवक अर्वाडबाट कुलमान घिसिङ सम्मानित